आज सुनको मूल्य स्थिर, महिनाभर सुनको भाउ तोलामा ४,६०० रुपैयाँले गिरावट….. – SUDUR MEDIA
March 15, 2021 AdminLeaveaComment on आज सुनको मूल्य स्थिर, महिनाभर सुनको भाउ तोलामा ४,६०० रुपैयाँले गिरावट…..
काठमाण्डौ – सुनको मूल्य सोमबार स्थिर भए पनि चाँदीको मूल्य बढेको छ । छापावाला सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा ८६ हजार एक सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य तोलामा पाँच रुपैयाँले बढेर १२ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार चाँदीको मूल्य तोलाको १२ सय ७० रुपैयाँ थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्: महिनाभर सुनको भाउ तोलामा ४,६०० रुपैयाँले गिरावट ! फागुन महिनाभर सुनको भाउ तोलामा चार हजार ६०० रुपैयाँले गिरावट भएको छ । फागुनको पहिलो कारोबार दिन २ गते, आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यसपछिका दिनमा भने सुनको मूल्य निरन्तर रुपमा घटेर सो महिनाको अन्तिम कारोबार दिनसम्म आईपुग्दा सुन ८६ हजार २०० रुपैयाँमा झरेको हो ।
फागुन ४ गते महिनाको सबैभन्दा उच्च कारोबार मूल्य प्रतितोला ९० हजार ९०० रुपैयाँ देखिन्छ । त्यसयता भने सुन प्रायजसो ८५ हजार भन्दा माथि किनबेच भएको थियो ।
चैत १ गते भने सुनको भाउ वृद्धि भएको थियो भने चैत २ गते सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । यस दिन सुन प्रतितोला ८६ हजार ६०० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ ।
चाँदीको भाउ पनि ओरालो लाग्यो ! चाँदीको भाउ भने फागुन महिनाभरमा ६५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । फागुन २ गते, आइतबार प्रतितोला एक हजार ३३५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी महासंघका अनुसार फागुनको अन्तिम कारोबार दिन भने चाँदी प्रतितोला एक हजार २७० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यस महिनामा फागुन २१ गते र २३ गते चाँदीको न्यूनतम भाउ प्रतितोला एक हजार २५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । फागुन ४ गते र ११ गते भने प्रतितोला एक हजार ३६० रुपैयाँमा सबैभन्दा उच्च मूल्य तोकिएको महासंघको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।
चैत महिनाको पहिलो दिन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको थियो । चैत २ गते भने चाँदी प्रतितोला पाँच रुपैयाँले वृद्धि भएर एक हजार २७५ रुपैयाँमा कारोबार हुँदैछ ।